Indawo entle yaseTurin
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSalvatore
I-91% yeendwendwe zakutshanje inike uSalvatore iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu iye yahlaziywa ngokupheleleyo ukuze ikunike indawo eyamkelekileyo netofotofo. Ifakwe kwindawo yokuhlala engaphandle kweTurin, sisiseko esifanelekileyo sokufikelela ngokulula kumbindi wesixeko kunye nezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi.
Indlu iye yahlaziywa ngokupheleleyo ukuze inike indawo eyamkelekileyo netofotofo. Ifakwe kwindawo yokuhlala ekufutshane neTurin, sisiseko esifanelekileyo sokukwazi ukufikelela ngokulula kumbindi wesixeko kunye nezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi.
Indlu enkulu kwisakhiwo esihle esinemigangatho emibini, ebekwe kwindawo ezolileyo ngaphandle kweTurin kunye nemizuzu eyi-10 ukusuka kwindawo yokuzingela yaseStupinigi.
Le ndlu isandula ukulungiswa yalungiswa kwaye inegumbi lokungena lokungena, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo nge-oveni yombane kunye nesitya sokuhlamba izitya, igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elikhulu elibandakanya ishawa, ibhafu kunye nomatshini wokuhlamba. Ikhitshi likhokelela kwi-terrace encinci apho unokufumana isidlo sakusasa okanye sasemini.
Ukufikelela kwiflethi kwakhona kunokwenzeka ngokuphakanyiswa okukhululekile kunye nokuphangaleleyo komthwalo wakho.
Kwindawo ekufuphi nendlu kukho indawo yokupaka kawonke-wonke yasimahla yemoto yakho,
ivenkile enkulu, iivenkile zokutya, ikhemesti, icuba, ibhasi. Imizuzu embalwa ngemoto ukusuka kwindawo yokuqubha kunye nesikhululo sikaloliwe.
Indlu enkulu kwimigangatho emibini yokwakha enomtsalane, ebekwe kwindawo ezolileyo ngaphandle kweTurin kunye nemizuzu eyi-10 kude neStupinigi Hunting Palace.
Indlu le ehlaziyiweyo, landlelwe iquka iholo zokuhlala, ikhitshi yaxhobisa ngokupheleleyo oveni yombane kunye njengesicocisi, lokulala kabini kunye lokuhlambela enkulu equka isiphango, yokuvasa kunye umatshini wokuhlamba. Kutya okanye lesidlo sasemini.
Ukufikelela kwiflethi kukwanokwenzeka kunye ne-elevator efanelekileyo kunye nebanzi yomthwalo wakho.
Kufuphi nendlu kukho ipaki enkulu yasimahla kawonke-wonke, iivenkile ezinkulu, iivenkile ezithengisa ukutya, ikhemesti, icuba, ibhasi. Imizuzu embalwa ngemoto ukusuka kwi-swimmingpool kunye nesikhululo sikaloliwe.
Umbuki zindwendwe ngu- Salvatore
Ciao, mi piace viaggiare con la mia famiglia, scoprire nuovi posti e incontrare nuova gente con la sua cultura e le sue tradizioni. Hello, I like to travel with my family, discover…
Iindwendwe zingaqhakamshelana nam nangaliphi na ixesha ngayo nayiphi na imfuno.
Iindwendwe zingaqhakamshelana nam nanini na ngazo naziphi na iimfuno.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nichelino